Real-Nguva Nhare mbozha naZapp360 | Martech Zone
Real-Nguva Nhare dzeShambadziro neZapp360
China, May 22, 2014 Douglas Karr
Zapp360 iri kuvandudza nzira iyo kushambadza nhare kunounzwa kune vatengi maererano nedhizaini uye kukosha kwayo. Chinyakare kushambadzira nharembozha kunosanganisira makambani anongoshandisa -zve desktop browser kushambadzira - isina kugadzirwa, isina chinangwa uye haina hanya mashandisiro evashandisi nema skrini madiki.
Kushambadzira nharembozha indasitiri inosvika mabhiriyoni gumi nemana emadhora uye fungidziro dzese ndedzekuti icharamba ichikura, asi izvi hazviitike kusvikira ruzivo rwevashandisi rwekupedzisira rwaiswa kumberi nepakati. Saka Zapp yakadzokera kumashure mune ramangwana nekugadzira yekutsikisa mameseji kushambadza yuniti yaizounza kutaurirana nekuchimbidzika uye mamiriro nespeed yemushandisi… iri munguva chaiyo-nguva.
Imwe yemasiyano akakosha epuratifomu ndiko kumhanya uko kushambadzira kunogona kuenda kunorarama. Grafiki, kana inoonekwa kushambadza inotora nguva kudhonza pamwe chete, asi zvinyorwa, zviri nyore sezvazvinouya. Uye nekupihwa mataurirwo anoita vanhu kuburikidza netwitter zvakanyanya nhasi, zvinyorwa chishandiso chekutaurirana chinoramba chiri panguva uye chakakodzera kune vateereri kwese kwese.
The Zapp360 chikuva chinounza unobtrusive scrolling meseji inosvika zana nemakumi mana mavara akaiswa mukati mevatengi 'mafoni mabhurawuza kana maapplication panguva yakatarwa nemushambadzi. Vatengi vanogona kungo tepa meseji kuti vaende kunzvimbo, isa runhare, ona vhidhiyo, kudzikinura coupon kana nyika pawebsite yevanoshambadzira. Iyi nhanho yekukurumidza uye yekudyidzana inotyaira hupfumi ruzivo uye kununura shanduko mitengo iyo yakanyanya kupfuura maindasitiri mavhareji.
Iyo Zapp360 chikuva iyo inogara kuseri kwezvishambadziro zviri nyore kumisikidza, maneja, uye matanho akanangwa nhare dzekushambadzira nhare munguva chaiyo (CTRs nezvimwewo) saka hausi kumirira mushumo pakupera kwemushandirapamwe kuti uone kana kuri kushanda kana kwete.
Iwo ma ads ari nyore kune vamiririri uye marangi ekumisikidza nekuita. Somuenzaniso huya nechishambadziro chepithy mune mavara zana nemakumi mana kana mashoma).
Zvikurukuru, Zapp360 iri nyore kushandisa mushambadzi maneja sezvazviri kune wekupedzisira mushandisi anoona kushambadza. Funga nezvazvo se tweet iwe yaunogona kumhanya pamusoro inoenderana peji rewebhu mune mbozha browser iyo mutengi ave kutotarisa. Pfupisa ruzivo nekufona kuti chiitwe munzvimbo yawakatobatanidzwa. Neye chaiyo-nguva yekushambadzira mbozhanhare, mushambadzi anogona kutyaira zvirinani uye zvakapfuma kubatana pakati pevatengi nemashambadziro aanoona, sezvo ari akakodzera uye akakodzera.
Tags: nharembozha yekushambadzirakushambadzira kwenhare-Chaicho nguvazvapp360
6 Zvikonzero Zvakakodzera Kutenga B2B kana B2C Prospect Chinyorwa